တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း သည် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မြောက်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းရှိ အရှေ့လောင်ဂျီကျူ ၁၈၀° မှ ၁၀၀° ကြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ထိုဒေသကို အနောက်မြောက် ပစိဖိတ် ရေနက်ပိုင်းဒေသဟု ရည်ညွှန်းကြပြီး နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများအနက် သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါး ဖြစ်ပေါ်ရာ ဒေသဖြစ်သည်။
မတူညီသောအပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းသုံးခုကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင်အနောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် (မာရီယာ, ကျောက်စိမ်း နှင့် Saomai တို့တွင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်) ။ အောက်ပိုင်းနှင့်အထက်ပိုင်းရှိဆိုင်ကလုန်းများသည် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဖြစ်သည်။
↑ Chris Landsea (2010-06-01). "Subject: F1) What regions around the globe have tropical cyclones and who is responsible for forecasting there?". Journal of Geophysical Research: Atmospheres: D06108. Retrieved on 2011-03-30.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း&oldid=503669" မှ ရယူရန်
၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။